शीर्षकमा बाइबल पदहरू: चमत्कार -> भगवान
येशूमाथि भरोसा गरेको हुनाले लङ्गडाले बल पायो। येशूको नाउँ सुनेर यिनको हृदयमा विश्‍वास जाग्‍यो अनि यिनको विश्‍वासले गर्दा अब तपाईंहरूले यिनलाई पूरै निको भएको देख्‍दै हुनुहुन्‍छ।
उहाँले भन्‍नुभयो, “तिमीहरूले सम्‍पूर्ण रीतले मैले भनेका कुराहरू मान्‍यौ, म जे कुरा ठीक ठान्‍दछु, त्‍यो गर्‍यौ र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्‍यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्‍याएको थिएँ, ती कुनै पनि तिमीहरूमाथिपर्नेछैन। म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमप्रभु हुँ।”
“म परमप्रभु सबै मानिसहरूका परमेश्‍वर हुँ। मेरो लागि केही कुरो कठिन छ र?
यसरी गालीलको काना सहरमा अचम्‍मको चिन्‍हद्वारा येशूले आफ्‍नो महिमा पहिलोपल्‍ट प्रकट गर्नुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्‍वास गरे।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिँदै भन्‍नुभयो, “यो मानिसबाट हुनै नसक्‍ने काम भए पनि परमेश्‍वरबाट चाहिँ हुन सक्‍छ।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “सक्‍नुहुन्‍छ भने भनी किन भन्‍छौ? विश्‍वास गर्नेलाई त सबै कुरा हुन सक्‍छ।”
येशूले भन्‍नुभयो, “तिमीहरूको विश्‍वास कम भएकोले गर्दा हो। साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, तिमीहरूसँग रायोको एउटा दाना जतिको विश्‍वास छ भने यस पहाडलाई यहाँबाट हटिजाभन्दा यो जानेछ र तिमीहरू जे पनि गर्न सक्‍नेछौ।
येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “यो मानिसबाट हुनै नसक्‍ने कुरा हो, तर परमेश्‍वरबाट भने सबै कुरा हुन सक्‍छ।”
येशूले जवाफ दिनुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, तिमीहरूले कति पनि शङ्का नगरी विश्‍वास गर्‍यौ भने नेभाराको रूखलाई मैले गरेजस्‍तै गर्न सक्‍छौ र त्‍यति मात्र होइन, तिमीहरूले यस पहाडलाई ‘यहाँबाट हटी समुद्रमा खस्’ भन्‍यौ भने पनि त्‍यस्‍तै हुनेछ।
 ख्रीष्‍टले मेरो जीवनद्वारा गर्नुभएको कामको बारेमा मात्र बोल्‍ने आँट गर्छु। परमेश्‍वरलाई मान्‍न मैले अन्यजातिका मानिसहरूलाई मेरा काम र प्रचारबाट सिकाएको छु। आश्‍चर्यकर्म, शक्तिशाली चिन्‍ह र पवित्र आत्‍माको शक्तिले यरूशलेमदेखि इल्‍लुरिकन भन्‍ने देशसम्‍मको यात्रा गरेर मैले ख्रीष्‍टको बारेमा सम्पूर्णरूपले प्रचार गरेको छु।
 परमेश्‍वरले पावलको हातबाट अचम्‍मका असाधारण कामहरू गर्नुभयो। यहाँसम्‍म कि मानिसहरूले पावलको शरीरमा रूमाल वा मजेत्रो छुवाएर बिरामीहरूकहाँ लैजान्‍थे। यसरी ती बिरामीहरू निको हुन्‍थे र भूत लागेकाहरूबाट भूतहरू निस्‍कन्‍थे।
 यस्‍तो कुरो ममा आएको भए म परमेश्‍वरलाई उजुर गर्नेथिएँ र आफ्‍नो मुद्दा उहाँको अघि पेश गर्नेथिएँ। उहाँका महान् कार्यहरू हामी बुझ्‍न सक्‍दैनौं, उहाँका अचम्‍मका कामहरूको सीमा छैन।
 हामीभित्र काम गर्ने शक्तिद्वारा हामीले मागेको र सोचेको भन्दा प्रशस्त मात्रामा दिन सक्‍नुहुने उनै परमेश्‍वरलाई मण्‍डली र येशू ख्रीष्‍टमा सबै युग सबै समय र सधैँभरि प्रशंसा होस्। आमेन।
 अब हे प्रभु, तिनीहरूले दिएको धम्‍कीतिर ध्‍यान दिनुहोस्। तपाईंको सन्‍देश साहससँग प्रचार गर्न आफ्‍ना सेवकहरूलाई शक्ति दिनुहोस्। आफ्‍ना सेवकहरूलाई तपाईंको पवित्र सेवक येशूको नाउँमा बिरामीहरू निको पार्ने अनि अचम्‍मका कामहरू गर्दै चिन्‍हहरू देखाउने शक्ति दिनुहोस्।” यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्‍लियो। तिनीहरू सबै पवित्र आत्‍माले भरिए र तिनीहरूले परमेश्‍वरको वचन नडराइ सुनाउन थाले।
 अनि विश्‍वास गर्नेहरूसँग यस्‍ता चिन्‍हहरू पाइनेछन्— उनीहरूले मेरो नाउँमा भूतहरू निकाल्‍नेछन् र नौला-नौला किसिमका भाषाहरूमा बोल्‍नेछन्। उनीहरूले सर्प समाते पनि, विष पिए पनि उनीहरूलाई कुनै हानि हुनेछैन अनि बिरामीहरूमाथि हात राख्‍दा तिनीहरू निको हुनेछन्।” चेलाहरूसँग यसरी कुरा गर्नुभएपछि प्रभु येशू स्‍वर्गमा उचालिनुभयो र उहाँ परमेश्‍वरको दाहिनेपट्टि बस्‍नुभयो। त्‍यसपछि चेलाहरूले चारैतिर गएर उहाँको प्रचार गरे। प्रभुले उनीहरूसँग भएर काम गर्नुभयो र उनीहरूले प्रचार गरेका कुरालाई अचम्‍मका कामहरूद्वारा सत्‍य ठहराइदिनुभयो।
 येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूले नै यिनीहरूलाई खान देओ।” उनीहरूले भने, “प्रभु, हामीसँग के छ र? पाँच वटा रोटी र दुईटा माछा मात्रै छन्। के हामीले यति धेरै मानिसहरूलाई खानेकुरा किनेर ल्‍याउनू?” त्‍यहाँ लोग्‍ने मानिसहरू मात्रै पाँच हजार जति थिए। येशूले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “मानिसहरूलाई पचास-पचासको लहरमा बस्‍न लगाओ।” चेलाहरूले मानिसहरूलाई त्‍यसै गरी बस्‍न लगाए। त्‍यसपछि येशूले पाँच वटा रोटी र दुईटा माछा लिनुभयो र स्‍वर्गतिर हेर्दै परमेश्‍वरसँग आशीर्वाद माग्‍नुभयो अनि उहाँले रोटी र माछा टुक्रा-टुक्रा पारेर चेलाहरूलाई बाँड्‍न लाउनुभयो। सबैले अघाउञ्‍जेल खाए। उब्रिएका रोटी र माछाका टुक्राहरू उठाउँदा त बाह्र डाला भरिए।
 त्‍यही हुलमा बाह्र वर्षदेखि रगत बग्‍ने व्‍यथाले दु:ख पाएकी एउटी स्‍त्री पनि थिइन्। तिनले आफ्‍नो भएभरको सम्‍पत्ति उपचारमा खर्च गर्दा पनि कसैले तिनलाई निको पार्न सकेका थिएनन्। तिनले मानिसको घुइँचोमा पछिल्‍तिरबाट आएर येशूको लुगाको छेउ छोइन्। उहाँको लुगा छुनेबित्तिकै तिनको रगत बग्‍ने व्‍यथा निको भइहाल्‍यो। येशूले सोध्‍नुभयो, “मलाई कसले छोयो?” तर सबैले “मैले त छोएको छैनँ,” भने। अनि पत्रुसले भने, “गुरुज्‍यू, तपाईंलाई त मानिसहरूको घुइँचोले नै मिच्‍तै छ।” तर येशूले भन्‍नुभयो, “होइन, कसैले मलाई छोएकै हो किनभने मबाट शक्ति निस्‍केर गएको मैले थाहा पाएँ।” अब लुकिरहनुनहुने रहेछ भन्‍ने थाहा पाएर ती स्‍त्री डरले काम्‍दै आइन् र उहाँको पाउमा परिन्। तिनले उहाँलाई छोएको र छुनेबित्तिकै निको भएको कुरा सबैको सामुन्‍ने भनिन्। येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए छोरी, तिम्रो विश्‍वासले तिमीलाई निको पारेको छ, अब शान्‍तिसित जाऊ।”
 येशू फेरि गालीलको काना सहरमा जानुभयो। त्‍यही सहरमै उहाँले पानीलाई अङ्‌गुरको मद्य बनाउनुभएको थियो। येशू यो सहरमा हुँदा कफर्नहुम सहरमा बस्‍ने एक जना सरकारी कर्मचारीका छोरा बिरामी थिए। येशू यहूदिया क्षेत्रबाट गालीलमा आउनुभएको छ भन्‍ने कुरा सुनेर ती सरकारी कर्मचारी येशूकहाँ आए र येशूलाई “मेरो मर्न आँटेको छोरालाई आएर निको पारिदिनुहोस्,” भनेर बिन्‍ती चढाए। येशूले उनलाई भन्‍नुभयो, “अचम्‍मका काम र ठूला चिन्‍हहरू नदेखुञ्‍जेल तिमीहरूले कहिल्‍यै पनि विश्‍वास गर्दैनौ।” कर्मचारीले भने, “हजुर, दया गरी बालक मर्नुभन्दा अगाडि नै आइदिनुहोस्।” येशूले उनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो छोरा बाँच्‍नेछ, जाऊ।” अनि ती कर्मचारीले येशूको वचनमा विश्‍वास गरे र फर्के। जाँदैगर्दा बाटोमा नै नोकरहरूले उनलाई भेटेर भने, “हजुरको छोरा निको हुनुभयो।” उनले नोकरहरूलाई “मेरो छोरा कुन घडीदेखि निको भयो?” भनेर सोधे। तिनीहरूले भने, “हिजो दिउँसो एक बजेदेखि उहाँलाई ज्‍वरोले छोड्यो।” तब ती कर्मचारीले येशूले ‘तिम्रो छोरा बाँच्‍नेछ’ भन्‍नुभएको घडीदेखि नै निको भएको रहेछ भनेर थाहा पाए। यसैले गर्दा उनले र उनको घरानाले येशूमा विश्‍वास गरे। योचाहिँ यहूदियाबाट गालीलमा आएर येशूले गर्नुभएको दोस्रो अचम्‍मको चिन्‍ह हो।